Magnesium Boride Powder, MgB2 - Goodao Technology Co, Ltd.
Molecular fomula MGB2
CAS Nhamba 12007-62-4
Kuwandisa 2.57 g / cm3
Nzvimbo yakanyunguduka 830 C
Zvishandiso Magnesium diboride superconductor mune yemagetsi, yemagineti, yekupisa uyezve ine zvakakosha zvinoshandiswa. Superconducting magineti, magetsi anotamisa masline uye inonzwisisika magnetic field michina
Iyo inozivikanwawo se magnesium borate
Kemikari fomula MgB2
Molecular uremu 45.93
CAS nhamba 12007-25-9
Nzvimbo yakanyunguduka 830 ℃
Kuwanda kuri 2.57g / cm3
Magnesium diboride inhengo yeionic ine hexagonal crystal chimiro. Icho chinopwanya uye chakaomarara zvinhu zvine mashoma ductility. Icho chikamu chekupindirana. Magnesium uye boron maturakiti akarongedzwa zvakasiyana. Ichashandura kuita superconductor patembiricha padyo padhuze neiyo chaiyo tembiricha ye40K (kureva - 233 ℃). Iyo tembiricha yekushandurwa kwayo ingangoita zvakapetwa zvakapetwa zvakapetwa neyavamwe superconductors erudzi rumwe chete, uye iko chaiko kushanda tembiricha iri 20 ~ 30K. Iyo superconducting tembiricha tembiricha yeMGB2 ndeye 39K, ndiko kubvisa 234 ℃, inova yakanyanya kupisa tembiricha yesimbi komponi superconductors. Sechinhu chitsva chine superconductivity, magnesium diboride inovhura nzira nyowani yekudzidza chizvarwa chitsva cheakanyanya tembiricha semiconductor ine yakapusa chimiro. Iyo superconductor magnesium diboride isimbi simbi inoumbwa nekubatanidzwa kwemagnesium uye boron muchiyero che1: 2. Iyo inozivikanwa neakawanda zviwanikwa, yakaderera mutengo, yakakwira conductivity, nyore synthesis uye yakapusa kugadzirisa.
Nekuti MgB2 iri nyore kugadzirwa matetepa emafirimu newaya, inogona kushandiswa zvakanyanya mukugadzira kweCT scanner uye zvimwe zviridzwa zvemagetsi, zvinoriumba zvemakomputa makuru uye zvikamu zvemagetsi ekufambisa emagetsi. Iyo ine yakafara yekushandisa tarisiro mumunda wemagetsi uye komputa. Rudzi rwehuwandu hwehuwandu hweMgB2 superconductor sampuro yakabudirira kugadzirwa nemhando yepamusoro tembiricha uye yakanyanya nzira yekumanikidza muChina, iri padyo padanho repasi rose. Zvingangodaro zvinoshandiswa zveMgB2 zvinosanganisira superconducting magnets, tambo dzemagetsi dzekufambisa uye inonzwisisika yemagineti detectors. Muna 2001, vaongorori vakawana kuti nondescript compound, magnesium diboride, inoshanduka kuita superconductor patembiricha iri padyo padyo nemhedzisiro ye40K (- 233 ℃). Iyo tembiricha yekushandurwa kwayo ingangoita zvakapetwa zvakapetwa zvakapetwa neyavamwe superconductors erudzi rwakafanana, uye iko chaiko kushanda tembiricha iri 20 ~ 30K. Kuti uwane tembiricha iyi, mvura neon, mvura hydrogen kana yakavharwa kutenderera firiji inogona kushandiswa kutonhora iyo tembiricha.
Zvichienzaniswa nekutonhora kwemaindasitiri kweiyoobium alloy (4K) ine mvura helium, idzi nzira dziri nyore uye dzinodhura. Kana uchinge wadhonzwa nekabhoni kana zvimwe zvisina kuchena, kugona kwemagnesium borate yekuchengetedza superconductivity hakuna kushomeka pane iyo niobium alloy kana kunyangwe zvirinani mune iyo magnetic field kana yazvino. Anogona kushandisa anosanganisira superconducting magineti, magetsi ekufambisa mitsara uye inonzwisisika yemagineti detectors.
Pashure: Nesilicon Boride Upfu, SiB6
Zvadaro: Nickel Boride Upfu, Ni2B
Magnesium boride yeupfu Mafekitori
Magnesium boride yeupfu Fekitori
Magnesium boride yeupfu Mugadziri
Magnesium boride yeupfu Vagadziri
Magnesium boride yeupfu Mutengo
yakachena magnesium boride powder Mugadziri